Xcel Energy ee Nobles Wind Farm
Barnaamijka "Smarter Grid" ee Minnesota
Wadiiqooyinka Taabacsan Nidaamka Gaadiidka Nabadgalyada, Nabadgelyada iyo Gaadiidka
Minnesota waxay ka fariisan kartaa dhirta dhuxul ee gobolka oo dhan, marnaba ma dhisi doonto geedka dabiiciga ah ee dabiiciga ah oo wali la kulma dalabka tamarta ee dadka iyada oo loo marayo ilaha tamarta nadiifka ah ee dib loo cusboonaysiin karo, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo gudbisay Hay'adda McKnight Foundation. Warbixintu waxay faahfaahinaysaa sida Minnesota ay si weyn u yareeyn karto kalsoonida jiilalka fosilka iyadoo la beddelayo tamarta hadda loo isticmaalo dhismayaasha iyo qaybta gaadiidka leh ilo tamar oo nadiif ah si loo gaaro bartilmaameedka gobolka ee hoos u dhigista gaaska dabaysha: 80% ilaa 2050. Minnesota hadda ay ku guuldareysteen in ay la kulmaan himilooyinkooda dhimista kaararka.
Warbixinta, "Barnaamijka Smarter-ka ee Minnesota: Waddooyinka Wadajirka ah ee Nidaamka Gaadiidka Nabadgelyada, Raacsan ee la Qaadan karo iyo Nidaamka Tamarta" ayaa muujinaya in:
Kharashka korontada ayaa hoos u dhigi lahaa. Heerka korontada ayaa hoos udhaca qiyaastii 30% celcelis ahaan qoysaska waxay ku badbaadinayaan qiyaastii $ 1,200 sanadkiiba kharashka tamarta.
Nadiifinta Tamarta Shaqooyinka Shirkadda Triple. Shaqooyinka ku jira qaybta tamarta nadiifka ah waxay ka badan tahay seddexleer, iyada oo abuuraysa qiyaastii 14,000 oo shaqo oo ka mid ah warshadaha dabaysha iyo 36,000 oo shaqo oo ka shaqeeya warshadaha cadceedda 2050. Dhab ahaantii, shaqooyinka, dakhliga, iyo heerarka heerka gobolka oo dhan waxay kordhinayaan xaaladaha tamarta nadiifka ah.
Nadaafadda Hawada iyo Bulshooyinka Caafimaadka leh. Marka lagu daro hoos u dhigista gaasaska aqalka dhirta, warbixintu waxay muujinaysaa hoos u dhac ku yimaada wasaqda kale ee waxyeellada caafimaadka bini'aadamka. Tan macnaheedu waa hawo nadiif ah iyo bulshooyin caafimaad qaba.
Awoodda qaybaha gaadiidka iyo kululaynta tamarta nadiifka ah waxay bixisaa hoos u dhigis hawada wasakhaysan. Inkasta oo jiilka korontada ee gobolka uu nadiifinayay, haddana Minnesota lama horumarin qaybaha gaadiidka iyo kuleylka. Warbixintu waxay muujinaysaa xaaladaha si loo yareeyo tamarta korontada iyo gaadiidka korontada nadiifka ah, hoos u dhigga gaaska qolfaha hawada laga soo saaro qaybahaas.
"Warbixintan waxay muujinaysaa in Minnesota ay gaari karto yoolalka dhimista gaaska dabiiciga ah 2050-ka dhismayaasha, tamarta, iyo gaadiidka iyada oo la siinayo tamar lagu kalsoon yahay oo qiimo jaban leh," ayuu yiri Kate Wolford, oo madax ka ah Xarunta McKnight Foundation. "Sii waditaanka horumarka gobolka ee tamarta nadiifka ah kaliya ma ogola in aan wax ka qabano isbedelka cimilada, hase yeeshee wuxuu si weyn u yareeyn doonaa hawada wasakheynta, kordhinta caafimaadka bini'aadamka, iyo kobcinta dhaqaalaheena iyadoo la kordhinayo tirada shaqooyinka qaybaha tamarta 2050."